Foot à 7 Tournoi Fifankatiavana Lasan’ny Fc Tambazotra Ambodirano Ivato ny omby matavy
Tontosa tamin’ny alahady 16 febroary 2020 lasa teo, teny amin’ny kianja Miolaka Mamory Ivato, ny famerenana ny lalao famaranana baolina kitra lalaovin’olona 7 :
“Tournoi Fifankatiavana” nokarakarain’ny Hotely Besetroka ao an-tsenan’Ivato ka nifanatrehan’ny ekipan’i Mamory City Fc sy ny Fc Tambazotra Ambodirano Ivato. Ity farany no nibata ny fandresena ka nandroaka ny omby matavy natao amboara rehefa nandavo teo an-jaridainany 3-2 ny Mamory City Fc. Baolina matin’i Stephanie teo amin’ny minitra faha-20 sy mbola nampiany iray indray teo amin’ny minitra faha-30 –telopolo ary nofaranan’i Tahiry teo amin’ny minitra faha-50 no niantoka an’io fandresen’ny Fc Tambazotra Ambodirano io. Niezaka nanatratra ny isa ihany ny ekipan’i Mamory Fc fa nanao ny tsy ambinina hatramin’ny farany ka dia io 3-2 io no nisarahan’ny roa tonta. Marihana fa tamin’ny tapa-bolana lasa no nanatontosana voalohany an’ity lalao famaranana ity saingy tsy vita hatramin’ny farany noho ny fiakaran’ny mpijery baolina teny ambony kianja. “Tirs au but” 2-2 no nisarahan’ny roa tonta tamin’izay.